किन लगाउने जनै ? - खबर मलाई
२९ श्रावण २०७६, बुधबार २९ श्रावण २०७६, बुधबार खबर मलाईLeaveaComment on किन लगाउने जनै ?
आज समाजले द्विजत्वलाई जातिसँग नभएर ज्ञानसँग जोडेको छ । उसले ग्रहण गरेको पेसाका आधारमा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यादि छुट्याउनुपर्छ भन्ने बहस सुरु भएको छ । मनु, वशिष्ठ र याज्ञवल्क्यहरूको समाजभन्दा आजको समाज धेरै भिन्न छ । परम्पराले श्रावणशुक्ल पूर्णिमा (जनैपूर्णिमा) लाई ब्राह्मणको, दसैंलाई क्षत्रियको र तिहारलाई वैश्यको पर्व भनेर वर्गीकृत गरेको भए पनि सबै वर्गका सनातनीले तिहारलाई सर्वाधिक महत्त्व दिइरहेका छन् । आज समाजको साध्य– आदर्श, ज्ञानार्जन, चिन्तन एवम् अध्यात्मसाधना नभएर द्रव्योपार्जन बन्न पुगेको छ । यसैले जनैपूर्णिमा ओझेल परेको हुुनुपर्छ ।
बर्दिवासमा पूर्वपश्चिम राजमार्गको पुल भत्किँदा सडक अवरुद्ध
५ असार २०७६, बिहीबार ५ असार २०७६, बिहीबार खबर मलाई